Schnitzel, cuntada caadiga ah ee Austrian | Safarka Absolut
Schnitzel, oo ah saxan Austrian caadi ah
Safar kasta oo aad ku timaado Austria Waa inaad keydisaa ugu yaraan hal miis oo kuyaala makhaayad dhaqameed si aad si wanaagsan ugu xisaabiso macmacaanka fudud ee ah cunnada qaranka: xikmad.
Si aad u adag, magaca saxda ah ee saxankan caanka ah waa Wiener schnitzel, taasi waa in la yiraahdo, "Viennese steak." Tani waxay na siin kartaa tilmaan bixin ku saabsan asalka, magaalada Vienna, inkasta oo sida aan gadaal ka arki doonno ay tahay arrin ka dood badan.
1 Asalka Schnitzel
2 Sidee loo sameeyaa Wiener Schnitzel dhabta ah
3 Halkee laga cunaa Schnitzel safarkaaga Vienna
3.3 Kafeega Dommayer
Dukumiintiga ugu horreeya ee magaca Wiener Schnitzel uu ka muuqdo waa buug cunto karis ah laga bilaabo sanadka 1831. Waxay ku saabsan tahay caanka Katharina Prato buuggeeda cuntada, halkaas oo lagu sharraxay sharaxaadda cuntooyinka caadiga ah ee Australiyaanka iyo koonfurta Jarmalka. Waxaa ku xusan Eingebröselte Kalbsschnitzchen, oo loo turjumi karo sida "Gogo 'hilib go' oo la dubay."
Laakiin sida saxanka halyeeyga ah wuxuu si wanaagsan ugu qalmay asal halyeeynimo. In kasta oo runnimadeeda ay su'aal ka taagan tahay, haddana waxaa jira sheeko ballaadhan oo ku faaneysa ninka laftiisa. Joseph radetzky sida soo-saaraha Schnitzel ee Austria.
Halyeeygu wuxuu leeyahay Marshal Radetzky wuxuu Schnitzel u keenay Vienna oo ka yimid Talyaaniga
Radetzky wuxuu jeclaan lahaa inuu cuno saxankan suugaanta leh intii uu ku guda jiray ololihiisii ​​militariga ee uu ku guuleystay waqooyiga Talyaaniga. Markuu soo noqday, boqorka Franz Joseph I oo reer Austria ah Wuxuu u diray si uu ugu sheego faahfaahinta oo dhan. Halkii aad uga sheegi lahayd xeeladaha iyo dagaalada, Radetzky wuxuu u sheegay inuu soo helay saxan cajaa'ib leh oo loo yaqaan 'Lombardy veal'. Isaga oo sheekada xiisaynaya, boqorka ayaa shaqsiyan waydiistay cuntada, taas oo si dhakhso leh caan uga noqotay maxkamadda boqortooyada.
Taariikhyahannadu way beeniyeen halyeeygan: muddo dheer ka hor Schnitzel ee Awstaraaliya, waraaqo hiliblo kala duwan ah ayaa horey loo sii kariyey, la shiilay ama la shiilay. In kasta oo hilibku ahaa badeecad keliya oo ay heli karaan fasallada ugu taajirsan, haddana habka loo diyaariyo waa wax iska fudud, oo gacan ka gaystay in lagu faafiyo saxankan.
Sidee loo sameeyaa Wiener Schnitzel dhabta ah
In kasta oo ay jiraan noocyo kala duwani, haddana cidina ma baadi fogayn cuntada asalka ah, taas oo habka ay u tahay wax fudud. Cunto kariyeyaasha reer Austaralia ee wanaagsan waxay isku raaceen in mid ka mid ah furayaasha diyaarinta Schnitzel wanaagsan ay tahay doorashada iyo jarista hilibka. Guud ahaan waa hilib lo'aad, in kasta oo ay jiraan cuntooyin isticmaala noocyo kale oo hilib ah.
Sida loo sameeyo Schnitzel
Weylka waxaa loo kala gooyay xaleef waaweyn oo qaab balanbaalis ah. Buuggu wuxuu amrayaa in dhumucdiisu tahay 4 milimitir. Kuwani waa tallaabooyinka la raacayo:
Diyaarinta hilibka. Marka hore waa inaad si fudud u garaacdaa filtarrada ilaa ay si fiican u siman yihiin oo ay ballaadhiyaan wax yar. Duufaanta ka hor, ku dar qanjaruufo milix iyo basbaas.
Kadib u gudub rooti: fillet-ka waxaa lagu maydhaa caano, ka dib waa la miiray, ka dibna waxa lagu maydhaa ukun la garaacay ugu dambaynna waxa la soo mariyay jajabkii rootiga. (Muhiim: ha burburin jajabyada rootiga, kaliya ha u hoggaansamaan steak si dabiici ah).
Tallaabada ugu dambeysa waa shiilid, digsi weyn oo shiil halkaasoo subagga ama subagga lagu shubo heerkulkiisu yahay 160 ° C. Markay hesho midab dahabi ah waxaan ogaan doonaa inay tahay waqtigii la soo bandhigi lahaa guntimaha, oo ay tahay inay ku dhex dabbaalaan dufanka si hilibku u noqdo mid isku mid ah .
Shchnitzel waa in si siman loo shiilaa
Habka dhaqameed ee loogu adeego Schnitzel ee Austria wuxuu saaran yahay saxan wareegsan oo weheliya qurxinta. Tani way kala duwanaan kartaa: salaar lagu qaso faashad ka samaysan vinaigrette macaan, chives ama basasha la jarjaray, salad baradho, dhir udgoon cad, salad qajaar ama shiilan Faransiis leh dhir. Sidoo kale, inta badan maqaayadaha Austrian-ka badankeyaashu waxay ku daraan liin dhanaan iyo caleen dhir ah.
Halkee laga cunaa Schnitzel safarkaaga Vienna
Sida saxan wanaagsan oo qaran, Schnitzel wuxuu ka muuqdaa ku dhowaad menu kasta oo ku yaal makhaayad kasta oo ku taal caasimadda Austria. Si kastaba ha noqotee, kaliya qaar ka mid ah ayaa lagu diyaariyaa heerarka tayada ee ka dhigaya mid jilicsan. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Makhaayad qoys oo duug ah oo ku taal xaafadda Neubau oo leh qurxin qurxan, oo ay aad ugu riyaaqeen Viennese iyo dalxiisayaashuba qiimaheeda jaban. Qaybaha waa deeqsi jawiguna waa mid wacan.
Makhaayada taariikhiga ah ee caanka ah ee ku xigta Stephensdom, halkaas oo adeegeyaashu ay xirtaan xarig qaanso oo sicirraduna ay mar horeba ka sareeyaan. Schnitzel-kooda way weyn yihiin oo si fudud ayey saxanka ugu habboon yihiin. Arag muuqasho. Iyo saxanka, dabcan.
In kasta oo magaceeda, in ka badan kafateeriya, ay tahay makhaayad gaar ah oo kuugga uu ku diyaariyo suxuunta dhaqanka Austrian, isagoo si daacad ah u raacaya cuntooyinka asalka ah una adeegsanaya waxyaabo tayo sare leh. Halkan Schnitzel wuxuu noqdaa shaqo farshaxan, waxaa mudan in wax yar la bixiyo si loogu raaxeysto. Intaa waxaa dheer, xagaaga waxaad ku qadeyn kartaa qado ama casho dhulkeeda wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Schnitzel, oo ah saxan Austrian caadi ah